China Ọmarịcha etemeete ahịhịa 13pcs akpụkpọ anụ na-agbanwe ela ewu ewu etemeete ahịhịa nwere aka osisi Onye nrụpụta na onye na-ebubata ya. Dongmei
Ọmarịcha ọkachamara etemeete ahịhịa 13pcs akpụkpọ anụ nwere mmasị na-agbanwe ewu ajị etemeete ahịhịa nwere aka osisi
Aha ngwaahịa Ọmarịcha ọkachamara etemeete ahịhịa 13pcs akpụkpọ anụ nwere mmasị na-agbanwe ewu ajị etemeete ahịhịa nwere aka osisi
Ihe Ntutu sịntetik+aka osisi+ferrule aluminom
Agba Black, pink, aja aja ma ọ bụ ahaziri
Akara Dongshen ma ọ bụ ahaziri
Ngwugwu 1set na igbe gbara gburugburu ma ọ bụ akpa PU, wee debe 200 n'ime katọn
Oge nlele 5-7days, ahaziri mkpa 15-20days
Oge mmepụta Dabere na ọnụọgụ gị, erughị 2000sets chọrọ ụbọchị 15-20, Karịa 2000sets bụ ihe dịka ụbọchị 20-35
Usoro ịkwụ ụgwọ Nkwụnye ego 30%, itule tupu mbupu
Ụzọ ịkwụ ụgwọ T/T, Western Union, L/C.
Uru anyị Ọnụ ego ụlọ ọrụ asọmpi+ọrụ ọkachamara+ezigbo mma
- 100% ohuru na ịdị elu dị elu.
- Nchacha etemeete zuru oke: Ntọala ntọala, ahịhịa Concealer, Eyeshadow ahịhịa, ahịhịa nku anya, ahịhịa na -eme ihie, ahịhịa egbugbere ọnụ, ahịhịa mascara.
- Na -anabata ntutu anụ anụmanụ dị mma na ntutu sịntetik nke na -enye ike dị mma ijide ntụ ntụ, dị nro ma na -atọ anụ ahụ gị ụtọ.
- ntutu ewu dị elu: mmetụ dị nro, ikuku ọhụrụ, na -ahapụ nke ọma, dabara adaba, na -emepụta ọbụna etemeete. A na -ejikarị ya eme ihe nchacha ahịhịa, ahịhịa ntụ ntụ, ahịhịa ndozi na brushes etemeete ndị ọzọ.
- Akpa akpụkpọ anụ dị nro mara mma, dị mfe ịnakọta ma na -ebu brushes.
- Ihe dị mkpa maka ọ bụghị naanị ndị ọkachamara kamakwa ndị ọrụ DIY.
- Nsucha etemeete mara mma nke gụnyere ihe niile ịchọrọ maka ngwa kwa ụbọchị.
- Isi ntutu sịntetik: ntutu dị nro ma dị nro, bristles dị elu. Akpụkpọ ahụ dị mma ma dị nro, ọbụlagodi etemeete. Enweghị akara akara, enweghị ntụ ntụ. A na -ebubata akụrụngwa ndị ahụ site na akara BASF nke Germany.
- 100% mara mma ma dị oke mma.
- Mgbakọta brushes etemeete: Ntọala ntọala, ahịhịa Concealer, Eyeshadow ahịhịa, ahịhịa nku anya, ahịhịa na -eme ihie, ahịhịa egbugbere ọnụ, ahịhịa mascara.
- Na -anabata ntutu anụ anụmanụ dị mma na ntutu sịntetik nke na -enye ike pụrụ iche ijide ntụ ntụ, dị nro ma na -atọ anụ ahụ gị ụtọ.
- Isi ewu ewu dị elu: Sọtụtụ mgbe, ikuku ọhụrụ, rna -abawanye nke ọma, dabara adaba, creates ọbụna etemeete. A na -ejikarị ya eme ihe nchacha ahịhịa, ahịhịa ntụ ntụ, ahịhịa ndozi na brushes etemeete ndị ọzọ.
- Akpa akpụkpọ anụ mara mma nke ukwuu, dị mfe ịnakọta ma buru brushes.
- A ọkachamara etemeete etemeete nke gụnyere ntọala niile ịchọrọ maka ngwa kwa ụbọchị.
- Ntutu sịntetik sitere n'okike: Sntutu na -adịkarị mma ma na -esighi ike, bristles dị elu. Sndị enyi na-adị nro ma dịkwa nro, ọbụlagodi etemeete. No akara akara, enweghị ntụ ntụ. A na -ebubata akụrụngwa ndị ahụ site na akara BASF nke Germany.
Nke gara aga: Ọkacha mma ọkachamara etemeete ahịhịa 12pcs eriri sịntetik ntutu ọla kọpa ferrule nwa aka etemeete ahịhịa set
Osote: Eco-friendly ezigbo mma osisi ejiri eriri eriri sịntetik 5pcs etemeete ahịhịa set
Ejiji etemeete Ọhụrụ
Nchacha etemeete ụlọ nrụpụta
Akara ụlọ ọrụ etemeete
Nchacha etemeete ịnweta
Nhazi etemeete nkeonwe
Omuma ojii ọkachamara 16pcs osisi handle ...
Dongshen Kabuki ahịhịa onwe labelụ okomoko natu ...
Onwe labelụ etemeete ahịhịa setịpụrụ ọlaọcha ...
Ewepụghị Top Kabuki Hegzagon Ihu Blush Liquid Powde ...
Ịcha ntụ ntụ siri ike vegan sịntetik ntutu 12pc ...
Dongshen ahaziri onwe labelụ eke ibu ...
Ngwá Ọrụ Nchacha etemeete, etemeete ahịhịa setịpụrụ, Ịkpụ afụ ọnụ, Ntọala ịkpụ afụ ọnụ, Nịm etemeete ahịhịa, Mee Ncha,